Tweaks: Moga na Wider Format | Martech Zone
Monday, September 4, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Anọ m na-arụ ọrụ na ngwụcha izu a na saịtị di na nwunye maka otu enyi m na Vancouver. N'ime nke a, elere m ọnụ ọgụgụ ụfọdụ anya wee lelee saịtị ole na ole na weebụ. Ekpebiri m ịmụba nhazi m iji mee ka ọ dị mfe ọgụgụ. Aga m etinye nyocha na nke a - mee ka m mara ma ị hụrụ ya n'anya ma ọ bụ kpọọ ya asị. Achọghị m ịhichapụ ndị ọbịa m na-agba ọsọ 800 x 600 ma ọ bụ n'okpuru, mana nke ahụ bụ naanị 3% nke ndị ọbịa m. N'ihi ya, echeghị m na ọ bụ otu ìgwè ndị na - agụ akwụkwọ m.
Ka m na-arụ ọrụ na saịtị ndị ahịa ndị ọzọ, aga m arụ ọrụ na obosara ndị a dabere na ndị na-ege ha ntị. Enwere m olileanya na ọ masịrị gị!
Elegharala Nkwenye, Ndakọrịta na Ezi mmemme anya
Ahụghị m nhazi ochie gị, mana m nwere mmasị na nke a na isiokwu Anaconda. Font dị mfe na anya… .bụ na ndabara anaconda font?
Jun 26, 2008 na 4:06 AM
Yabụ, kedu obosara 'obosara'? M na-ebipụta ọtụtụ foto na blọọgụ m na 480px obosara ugbu a dị obere!